Home Wararka G/X Mahad Cawad oo ka been abuuray xeerka GSH/B-13/12/17 (Caddeyn)
G/X Mahad Cawad oo ka been abuuray xeerka GSH/B-13/12/17 (Caddeyn)
Guddoomiye KX labaad ee golaha Shacabka Mahad Cawad oo ka bixinaayay jawaab celin mooshinkii kalsooni kala laabashada ee MW Farmaajo ee lagu soo eedeeyay qiyaano qaran iyo ku takri fal awoodeed ayaa sheegay in ay la wadaageen Gud. Maxamed Mursal qaraar soo baxay Bishii December 31, 2017 tixraaceeduna ahaa GSH/B-13/12/17 taasoo uu G/X Mahad Cawad si cad uga been sheegay qaraarkaas.
MOL ayaa heshay nuqulka qaraarka GSH/B-13/12/17 (Xasaanad ka qaadista xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka). kasoo ah qaraar ay soo saareen guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka, kaddib markii uu xeer ilaaliyaha qaranka warqad kasoo saaray laba xildhibaan in lagala noqdo xasaanadda, kuwaasoo oo kala ah;
Xil. Xasan Macallin Maxamuud iyo
Xil. Cabdisaabir Nuur Shuuriye.
Qaraarkan ayaa soo baxay kadib markii uu xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Daahir uu warbixin ka horjeediyay fadhiga guddiga joogtada ah ee Baarlabaanka, 21 Disember 2017 iyadoo laga filaayay in xeer ilaaliyaha uu ka jawaab celiyo codsigii Guddiga Joogtada ah ee ahaa in uu Xeer-ilaaliyaha guddiga horkeeno ama la wadaago caddeymaha uu arrinkan ka havo si uu Guddiga ugu qanco sida ku qeexneyd qoraalkii ay u direen 19 December 2017 oo ku sumadeeduna aheyad; 402/20/B-10/17.
Kaddib markii uu Xeer-ilaaliyaha ka gaabsaday in uu Guddiga la wadaago caddeymaha uu hayo xafidaada gal dacweedka awgeed, ayaa guddiga joogtada waxa ay soo saareen qaraarka tixraaciisu yahay GSH/B-13/12/17 laguna go’aamiyay in aanan xildhibaan xasaanad looga qaadi karin iyadoo aan lasoo buuxin shuruucda sida uu qabo sharciga iyo xeer hoosaadka Baarlabaanka.
G/X Mahad Cawad ayaa isku dayay in uu indha sarcaadiyo shacabka Soomaaliyeed isagoo
ka been abuuray sharciga isla markaana sheegay in mooshinka laga gudbiyay uu u gaar yahay Gud. Maxamed Mursal. Waxaa sidoo kale Mahad Cawad marlabaad uu isku dayay in uu shacabka indhasarcaadiyo waxaana la wada ogyahay shaqada guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisa iyo waxa uu faraayo sharciga iyo xeer hoosaadka golaha.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in Mahad Cawad iyo Cabdiwali Muudeey ay ahaayeen raggii qabtay mooshinkii laga keenay Gud. hore ee golaha Maxamed Sh. Cismaan Jawaari; waxaana isweydiin mudan halka uu xeerka uu maanta ka been abuurtay maalintii la keenay mooshinka Jawaari.
Yaa ka danbeeyay warqaddii kasoo baxday xafiiska xeer-ilaaliyaha ee ahayd in xasaanadda lagala noqdo labada xildhibaan?
Waxaa MOL ay loo xaqiijiyay in uu ahaa RW Kheyre shaqsiga bixiyay amarka in xasaanadda lagala noqdo labada xildhibaan, isagoo si shaqsi ah weerar siyaasadeed ugu ahaa dhammaan xildhibaanada ka fikradda duwan. Waxaa kale oo xusuusin mudan ujeedka kale ee laga laha warqadda xeer ilaaliyaha ay ahayd in la cabsi geliya xildhibaanada, waxaana uu soo saaray Xeer-ilaaliyaha warqaddaas maalmo kaddib markii la weeraray hoygii Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame.
Halka hoose ka dhageyso (Daqiiqada 4aad ka bilow – been abuurka Mahad Cawad xeerka GSH/B-13/12/17
Halka hoose ka akhriso xeerka GSH/B-13/12/17
Previous articleMotion filed to impeach Somali president
Next articleFarmaajo oo caawa lacag siinayo xildhibaankii ka noqda Mooshinka! Talo faraha aya ay ka baxday!!
Aqoonyahanada Puntland oo ku baaqaya in la baaro Qaraxyada Qatar sheegatay
Ciidamada AFRICOM ee Maraykanka ayaa Saxaafada Soomaaliya ku eedeyay ineey taageero...